Fiompiana baolina kitra Taxi service & Airport Transfer ☆ Taxi Airport Basel
Basel Airport Transfer & Taxi Airport Basel
Ny serivisy amin'ny fiara mandeha ho an'ny kilasy fanampiny, tsotra fotsiny sy mora amin'ny A hatramin'ny B. Na ny famindrana amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny seranan'i Basel, na ny serivisy fanompoana ao Basel, dia manao ny asa azo itokisana sy tsy misy vidiny isika.
Der Fahrdienst Basel Ho an'ny serivisy seranan-tsambo baiko any Basel sy Zurich, fiara fitaterana an-tserasera amin'ny seranam-piaramanidina taxis Basel. Ho an'ny hetsika, tsena (Art Basel, Baselworld), Fivoriana (WEF Davos,), fisehoan-javatra manokana, fitsangantsanganana manokana na raharaham-barotra. Miala aloha? Tonga any am-piasana amin'ny alina na manana entana maro be? Dia ianao no miaraka aminay Fandefasam-peo an'i Zurich ary i Basel no marina, anay Taxi Airport Basel dia mandeha foana. ny Basel Airport Transfer Ny fiara dia afaka manangona ny olona 7 sy ny entana rehetrao. Mandray soa avy amin'ny tolotra tsy dia mahafa-po sy mahasoa.
Manombatombana fotsiny ny sanda manokana
Ny serivisinay: Ny famindrana amin'ny seranana amin'ny taxi ao Basel Airport,Limousine service
Fandefasana fiara an-tariby sy taxi eto amin'ny seranam-piaramanidina Basel - Miaraka aminay ianao mitondra ny tsara indrindra!
Tongasoa eto amin'ny serivisy fanaterana anay any Basel! Mijery ny tanàna ve ianao, mandalo sa mikaroka fifindrazana amin'ny Limousine Service any Basel na taxi haingana Basel Airport? Ho an'ireo rehetra ireo sy ny maro hafa, ireo mpamily namana sy traikefa, ary koa fiaramanidina manokana misy. We chauffeur anareo ao an-tanàna, ohatra amin'ny fiverenan'ny seranam-piaramanidina ao Basel Baselworld ny Art Basel. Azontsika atao ny mividy mpanjifa sy olona manokana. Ankoatra izany, afaka mamandrika ny seranan-tsambo any Basel sy ny faritra manodidina ianareo, fa koa amin'ny fitsangatsanganana any an-tanàna hafa ohatra an'i Davos World Economic Forum miaraka aminay Fiambenana fiara WEF Davos, Mifandraisa aminay izao ary miaro ny tenanao any Limousine tsy misy afa-tsy ao Basel sy Zurich!
Fanompoana Limousine Basel - From Basel to Zurich Airport
Basel Isan-taona dia mpitsidika an-tapitrisany no avy any Soisa, Alemana na any amin'ny Gulf States. Tsy vitan'ny hoe mametraka toeram-pitsangatsanganana iray tapitrisa amin'ny alina izy ireo ao an-tanàna, te-hiketrika ihany koa izy ireo. Manomboka amin'ny A ka hatramin'ny B amin'ny tanàna fahatelo lehibe indrindra any Soisa, ohatra, avy any Basel mankany amin'ny seranam-piaramanidin'i Zurich, izany no mety hataon'ny Airport Basel Airport. Fiara mandeha amin'ny hotely mankany amin'ny toerana rehetra ao an-tanàna na mandefitra any amin'ny tanàna hafa. Na firenena hafa mihitsy aza! Izany indrindra no zava-nitranga izay ahitan'ny mpitsidika maro ao amin'ny tranokalanay ny serivisinay any Basel. Indrindra fa ireo mpizaha tany sy mpizaha tany no mampiasa ny seranan-tsambo any an-tseranana any Basel na manamboatra ny seranan-tsambo ataontsika mandritra ny fijanonany any Basel. Fa koa, raha toa ianao ka manantena fitsangatsanganana tsy hay hadinoina, toy ny ampahany amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana na ny fampakaram-bady iray, mandehana tsara amin'ny serivisy ataonay any Basel! Ary isika ao amin'ny transferservice-basel.ch dia mavitrika ary manolotra tolotra fiara tsy misy sisintany. Raha tianao ny hamela antsika hitondra anao any amin'ny kantonta na firenena hafa, dia tsy misy olana ho antsika izany!
Ny fotoana tsara indrindra ho an'ny serivisy serivisy fiantsenana / fiandrasana taxi ao Basel Airport
Na izany aza, dia mitoetra ho voalohany ao an-tanànan'i Basel fetra, araka izay rehetra, ny faritra tokoa ny 23 kilometatra toradroa: Aoka hatao anao tany Bâle, na mandany fotoana sasany eto, dia misy isan-karazany ny zava-nitranga nandritra ny famandrihana miaraka amin'ny fanompoana Limousine in Basel. Basel no tanàna fahatelo lehibe indrindra any Soisa ary betsaka tokoa ny manolotra olona maro. Izany dia misy fiantraikany amin'ny mponina, na ireo mpitsidika. Ireo izay mitsidika ny tanàna, na noho ny raharaham-barotra na ny fahafinaretana, afaka mandeha miaraka amin'ny fiarakaretsaka Basel Airport fanompoana ho toy ny dingana farany ny tonga ao amin'ny tanàna tsara tarehy. Ambony indrindra ny mpanao politika, olo-malaza na raharaham-barotra ny olona avy amin'ny firenena hafa Te-hanofa limousine amintsika satria hankasitraka ny fisainana mazava sy ny asa fanompoana manokana. Koa misy, ohatra, mpanao fanompoam-pivavahana, banky, zokiolona mpitantana na diplaomaty izay manakarama limousine tamintsika tany Bâle, ary mampiasa azy io ho toy ny Airport Taxi manokana. Basel koa hipetraka orinasa fanta-daza, toa an'i Novartis, Roche sy Swiss International Airlines, izay, ankoatry ny maro hafa, tsy tapaka Tompon'ny maro avo lenta raharaha fitsidihana Basel. Te-hanofa lozenina any Basel ho an'ny hetsika orinasam-pizahan-tany any Basel ve ianao? Ho an'ny saran-dalan'ny fandraharahana, afaka manofa ny fiara marina avy amintsika isika amin'ny fotoana mety amin'ny toerana mety! Marina koa izany ho an'ny tsy miankina nandehanany, ary koa ho an'ny olona manokana dia noho ny antony samihafa Basel mendrika foana ny fitsidihana (ary raha boky tonga avy any Zurich ho any amin'ny seranam-piaramanidina famindrana Zurich). Ity dia Symphonyfa Art Museum Baselfa Messe Basel na, avy amin'ny Customs amin'ny sokajy, ny Basler Fasnacht ary mihoatra noho izany aza. Ankoatra ireo teboka mpizahatany, dia misy ihany koa ireo hevi-dehibe eo amin'ny fiainana izay ahafahan'ny fiarakaretsaka avo lenta any Basel maneho hevitra tsara. Ohatra, ny serivisy tinay dia manome koa ny fampakaram-bady, ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana na ny andro firavoravoana. Mandresy amin'ny Basel Service Limousine, amin'ny fomba.
Fanompoana any Limoges Basel - Ny fiaranay any amin'ny renivohitra
Nahoana ianao no te handamina taxi-be mendri-kaja Basel? Noho ianao te-hanao fiantohana manokana na fiaramanidina iray manerana an'i Basel, amin'ny fiara tsara kalitao, miaraka amin'ny mpamily tsiahy? Izany indrindra no ananantsika ny VIP Shuttle Basel, izay miantoka amin'ny fiara ao amin'ny serivisy seranan-tsambo. Ny tolotra an-tsokosoko fanampiny dia miorina betsaka amin'ny kilasy fanampiny amin'ny mpamokatra fiara tsara indrindra. Mba hahazoana fiara sy azo antoka, dia miankina amin'ny kalitaon'ny fiara atao any Alemaina isika: Tsy afaka ny hahatratra ny tanjonareo fotsiny ianao miaraka aminay amin'ny seraseranareo any Basel. Tianay ianareo hahatsapa ho mahazo aina ao an-tanànanay, na aiza na aiza alehany. Izany dia fomba tsara hanavahana ny tenantsika amin'ny fiarakaretsaka, satria tsy vitan'ny hoe mampiroborobo anareo fotsiny izahay, serivisy tolotra izahay. Noho izany, miara-miasa amin'ny fiaramanidina avo lenta, azo itokisana sy avo lenta isika:
• Kilasy Mercedes E
• Fiara fiantsenan'ny Mercedes E
• Mercedes Viano (seza 8)
Ireo fiara ao amin'ny seraseram-tranonay dia mety ho an'ny fifindran'ny olona, ​​toy ny seranan-tsambo tsy misy seranan-tsambo na fitsangatsanganana miaraka amin'ireo vondrona lehibe kokoa. Ho an'ny filana rehetra dia manana fiara tsara indrindra isika "amin'ny voalohany". Manangona ireo mpanjifanay na aiza na aiza isika ary mitondra azy ireo any amin'ny toerana rehetra, izany no iray amin'ny votoaty amin'ny transferservice-basel.ch.
Fandefasana fiara taxi ao Basel - tsy avy any Basel mankany amin'ny seranam-piaramanidin'i Zurich
Tsy voatery ho "fotsiny" fotsiny ny taxi ao an-tanànan'i Basel - ny sambo avy any VIP dia hitondra anao any amin'izay tianao. Alao sary an-tsaina hoe tsy nitsidika an'i Basel fotsiny, fa i Switzerland kosa. Te-halefa any amin'ny seranam-piaramanidin'i Zurich ianao amin'ny alalan'ny famindranao ny seranam-piaramanidina any Basel na hiorina any Bern? Mazava ho azy, manolotra ihany koa ity serivisy mpamonjy entana ity amin'ny fiaranay manokana izahay. Fa tsy hoe fotsiny, mazava ho azy, ny seranan-tsambo dia miasa manerantany, te-handeha amin'ny 70km fotsiny any Freiburg any Alemana, mankany Stuttgart na Munich. Ary koa Liechtenstein, Frantsa, Italia na Frantsa dia mety ho toerana izay azonao atao ny mikendry ny hanompoana amin'ny seranan-tsambo iraisam-pirenena.
Ao amin'ny Limousine manokana dia tsy hamela na inona na inona ianareo, na fampiononana na fiarovana. Fanambarana: Ny mpitaingin-tsika rehetra dia tsy manavaka ny fahamendrehany, fa koa amin'ny alalan'ny fomba fitondrany amim-pitandremana. Mazava ho azy fa tsy midika izany hoe tsy ho vitanao ny fotoana anaovanao fotoana. Ny mpamily anay dia mahafantatra ny fitsipika momba ny fifamoivoizana amin'ny fiara an-tanàn-dehibe sy lavitra any amin'ny firenena samihafa ary hitondra anao amin'ny fomba mahitsy araka izay azo antoka mankany amin'ny toerana tianao.
Ny ekipa fiarakaretsaka ataonao Taxi Basel